"Waan ka xunahay?"
Su'aal "Waan ka xunahay?"
sano 2 3 bilood ka hor #331 by Gh0stRider203
Uma maleynayo in arrin sida aad u malaynayeen in ay sameeyaan lol
Tani waa mid ka mid sabab aan jeclahay autopilot iyo ILS
sano 2 3 bilood ka hor #333 by Dariussssss
wax wanaagsan ay tageenba go a wareegsan. Waxaa dhamaan doono ilaa shil ah oo waaaweyn haddii ay isku dayeen in ay dalka isku day ugu horeysay.
BTW, aad leedahay FB Gh0st?
sano 2 3 bilood ka hor #335 by JanneAir15
Taasi ahaa mid laga cabsado. Sidee bay xitaa isku dayi kartaa dalka sida in !? Waxaan jeclaan lahaa in aan la sameynin in xitaa on Qabille oo a. Xaggee ka dhacay jidka ag? (Wadanka)
sano 2 3 bilood ka hor #336 by Dariussssss
Mexico Waxaan qabaa.
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #340 by Colonelwing
Embraer ERJ-145LR / o-Zac (CN 145199)
Sawir Klaus Ecker
sano 2 3 bilood ka hor #353 by Gh0stRider203
Dariussssss qoray, waayo, wax wanaagsan ay tageenba ku hareeraysan tagaan. Waxaa dhamaan doono ilaa shil ah oo waaaweyn haddii ay isku dayeen in ay dalka isku day ugu horeysay.
Waxaan ka mid ah helay, waayo, VA ah aad had iyo jeer awoodo Me waxaa fariin iyo i ya siin doonaa My mid shakhsi ah in sida Waa in My SIG